Ny fomba hanombohana Trading Forex - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolNy fomba hanombohana Forex Trading
Ianao no tokony hanomboka ny raharaham-barotra vaovao. Soa ihany fa ny foto-drafitr'asa vaovao noho ny raharaham-barotra ao amin'ny toerana. Izy io dia ara-barotra maneran-tambajotra ny banky sy ny vola mpivarotra izay mifandray amin'ny alalan'ny aterineto hanaovana ny tsena amin'ny ora efatra amby roa-polo antony vola mpivarotra, Lehibe na kely, manerana an'izao tontolo izao.
Toy ny raharaham-barotra, dia mila birao izay mangina, mampahazo aina ary somary maimaim-poana ny fialam-boly. Ny birao dia tokony ho fitaovana amin'ny fifadian-kanina azo ianteherana ordinatera izay manana fifandraisana azo antoka aterineto. Ny tsara foana ny manana mitambatra copier, mpanao pirinty sy ny fandefasana fax mifandray amin'ny solosaina.
Rehefa manana ny solosaina sy ny aterineto eo amin'ny toerana, dia manoro hevitra anao hanaraka ireo dingana hanomboka:
Aoka ianao ho liana sy mianatra rehetra izay azo atao momba Forex
Paper ny varotra ao amin'ny fihetsiketsehana kaonty
Misafidiana Forex broker sy ny raharaham-barotra tena manomboka amin'ny kely maro
Hampitaovana ny tenanao amin'ny lelan fitaovana fanapahana sy ny rafitra
Aza Newbie fahadisoana
Tandremo ny tenanao fampianarana momba ny forex varotra.
1. Ho liana sy mianatra rehetra izay azo atao momba Forex.
Efa nanome anao ny sekoly mba hianatra momba Forex for maimaim-poana. Manoro hevitra anao izahay hamaky ny lahatsoratra rehetra, mampianatra ny tenanao aloha momba ny fototra sy ny fitantanam-bola, ary avy eo dia ny famakiana ny momba ny teknika sy ny tondro fototra, anisan'izany ny vola voafaritra tsara fototra.
Ny fianaranao dia tsy tokony hifarana amin'ny tranokalanay, na izany aza. Misy fitaovan'ny fitaovam-pampianarana an-tserasera: misy tranokala fanabeazana toy ny an'ny tenantsika manokana, ary koa ireo sehatra fifanakalozan-doka mifandraika amin'ny Forex toy ny an'ny tenantsika manokana. Ireo sehatra fifanakalozan-kevitra dia fomba tsara hikolokolo sy hifaneraseran'ny olona manana fahaizana manokana sy fahaiza-manao. Azonao atao ny manontany izay fanontaniana tianao ary misy olona manana fahalalana tsara sy fahaiza-manaony amin'io lohahevitra io dia tsy maintsy hamaly anao. Betsaka koa ny boky fanabeazana tsara Forex afaka mamaky ao amin'ny tranomboky na mividy an-tserasera.
Vakio, mihaino ny CD, hanatrika seminera, vakio isan'andro ny sehatra fiadian-kevitra sy mampihatra ny fahalalana vaovao. Ny zavatra rehetra mikatsaka ny hahafantatra momba ny varotra dia efa voasoratra, na niteny momba ny mpivarotra mahomby. Raha azonao atao ny mandoa vola ho an'ny fanabeazana izany, ny ankamaroany dia mety ho hita ho maimaim-poana. Miezaha mianatra zavatra isan'andro.
Fa ny fianarana dia tsy mamaky sy mihaino fotsiny. Tsy maintsy manao, izany hoe tsy maintsy mampihatra ny varotra (Voalohany ao amin'ny kaonty fihetsiketsehana ary avy eo amin'ny tena tantara).
2. Taratasy Trade Forex In A Demo Account
Raha toa ianao ka tsy mbola varotra Forex, azafady manomboka raharaham-barotra eny amin'ny MT4 Demo tantara. Demo tantara mamela ny mpampiasa mba hampiasa "milalao vola" mba manao raharaham-barotra miaraka amin'ny angon-drakitra velona. Ateriny ho tena mitovy traikefa toy ny raha nivarotra sy nividy amin'ny tena velona "tena-bola" tantara. Rehefa mamorona "Taratasy Trading" kaonty ianao afaka hanakalo vola ny lalao toy ny hoe nisy vola mafy anao manokana.
Raha ireo fihetsiketsehana ara-barotra kaonty ianao dia ho afaka ny hahita ny fomba tsena ny vola mitondra tena, ny fomba ny sehatra mitondra tena, sy ny fomba fitondrantena manoloana ny toe-piainana ara-teknika sy fototra izay vokany eo amin'ny tsena. Tokony ho mandray izany ho zava-dehibe kaonty fihetsiketsehana raha te-ianarantsika avy amin'ny zava-nitranga.
Mahery izahay mpiaro ny varotra miaraka amin'ny Metatrader (MT4) satria io ny sehatra ny safidy ho an'ny mpivarotra sy ny mpanakalo Forex. Tsy maimaim-poana, ary zavatra maro dia tonga fitaovana miaraka amin'ny mpanolo-tsaina maro manampahaizana manokana, fitaovana, tondro sy soratra mba hamela ny boky fampianarana tsotra sy be pitsiny sy ny varotra mandeha ho azy.
Rehefa mitady ho MT4 kaonty demo, ampitandremana fa ny ankamaroan'ny farany 1-3 volana ary avy eo dia tapitra. Ny vitsy an'isa ihany no maharitra mandrakizay, izany hoe, tsy maharitra izy ireo raha vantany vao mivarotra izany ianao indray mandeha isam-bolana. Aleoko ny kaonty Demo mandrakizay mifanohitra amin'ny anton'izany 1-3 izay mamoaka demo amin'ny antony mazava. Rehefa avy nampiditra sy nametraka ny demo ianao, dia tsindrio ny "File" ary tsindrio ny "Manokatra kaonty." Hanontany anao ny fanalahidy amin'ny fampahalalana misy anao, miaraka amin'ny safidy amin'ny fisafidianana ny volanao fototra, ny fampiasana azy ary ny fanombohana. Ny tahiry demo famoahana dia tokony hitovy amin'ny zavatra andrandrainao amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny ho avy.
Dia hahazo ny fidirana sy ny teny miafina avy hatrany rehefa avy famoronana kaonty fihetsiketsehana. Tsarovy ny mandika sy apetaho ny fidirana sy ny teny miafina amin'ny rakitra .txt, ary mitahiry izany ao amin'ny toerana azo antoka. Raha hahavery azy dia tsy ho afaka retrieve izany indray, dia raha miantso ny broker.
Amporisihana mpivarotra mba hitsapana ny fianarana sy fahaiza-manao fihetsiketsehana voalohany amin'ny kaonty Ka hanangana ny hatoky azy eo anoloan'ny manao raharaham-barotra tena renivohitra. Ny amin'ilay efa nanao hoe: tena tsy mahalala ny tenanao ho toy ny mpivarotra mandra-natakalo tao amin'ny tena tantara.
3. Andramo Real Trading Forex soa ho Broker
Na dia Demo ara-barotra ilaina, ianao amin'ny farany tsy maintsy miasa ny tenanao ho amin'ny raharaham-barotra tany amin'ny tantara tena amin'ny tena vola ny tsipika. Ho tena tsy fantatro hoe ahoana no dia tahaka ny mpivarotra mandra-varotra amin'ny tena tantara, fara fahakeliny, ny ambany indrindra haben'ny be. Fetra ny olombelona rehetra ny varotra (fitiavan-karena, tahotra, hambom-pon'ny, sns) ihany no afaka ho voasedra ka nataony eo ambany fanaraha-maso, rehefa ny vola no tena tandindomin-doza.
Maro Forex mpanakalo azo isafidianana, toy ny ao amin'ny tsena hafa rehetra, ary efa nanome anao ny fizarana manontolo, "mifidy ny Forex Broker," mba hanampy anao hanao ny safidy. Dia hanolotra ny broker ny mombamomba sy ny tantara no foto-kevitra ny fankatoavan'ny ny broker. Afaka bola nekena ny tantara amin'ny alalan'ny famatsiam-bola isan-karazany safidy, arakaraka ny broker, toy ny carte de crédit, banky tariby, PayPal, MoneyBookers, WebMoney. Mety ho avy hatrany, na maka andro vitsivitsy, arakaraka ny fomba.
Rehefa variana ho solon'ny tsara forex broker, mametraka fanontaniana etsy ambany:
Is the FX broker ny fielezan'ny ambany ampy?
Is the FX broker fitsipika voasoratra anarana tamin'ny manam-pahefana mikendry ny fiarovana ny mpanjifa liana?
Inona no fitaovana manao ny FX broker manome?
Karazana sisiny no manana politika?
Inona no karazana fanohanana mpanjifa manao ny FX broker manome?
Raha toa ka tsy manana ampy renivohitra, jereo raha ny FX broker manome Mini na mbola tsara kokoa, tantara madinika izay mitaky ambany startup vola?
4. Hampitaovana ny Tenanao Amin'ny nanapaka Edge Tools sy ireo rafitra.
Eo amin'ny ny toetry ny zavakanto sy ny sehatra ara-barotra Nianatra zava rindrambaiko, manana izany ho maimaim-poana amin'ny Download ny Metatrader 4 (MT4). MT4 dia mora ampiasaina, Tafiditra efa fitaovana tamin'ny maro ilaina tondro sy ny varotra fitaovana, ary ambonin'izany rehetra izany, dia maimaim-poana ary an'arivony ny mpivarotra no mampiasa azy io.
Mampirisika anao izahay mba mafy nibango ny aterineto sy ny sehatra fiadian-kevitra ho an'ny tondro matanjaka sy ny manam-pahaizana mpanolotsaina (EAs) novolavolain'ny mahay coders mba hanampy mpivarotra.
Manam-pahaizana momba Mpanolotsaina, fotsiny hoe ny EA, dia forex Robot natao mba hanome 100% milina raharaham-barotra eo amin'ny olona iray MT4 sehatra. The EA manara-maso ny tsena 24 / 7 ho an'ny fahafahana hividy sy hivarotra mifototra amin'ny varotra fepetra baikoina. Maro EAs azo azony ho maimaim-poana ao amin'ny toerana samihafa ao amin'ny aterineto. Maro kokoa izay azo vidiana, ary na Robot Ny vidin'ny vary, ny ankamaroany dia mivarotra eo anelanelan'ny $ 90 sy $ 300. Na izany aza, mitandrina ireo mpividy: ny robo sasany dia maherifo, ary ny ankamaroan'ny robots dia hahatonga ny mpivarotra matsora kokoa noho ny hatramin'izay, Robot. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny milina hanampy anao very vola bebe kokoa noho ny fandresena noho ny tsotra hoe ny tsena no mampidi-doza indrindra sy 95% ny milina tsy ho an'ny sasany ny antony mitovy izay 95% ny mpivarotra tsy.
5. Aza Forex ny Common Trader fahadisoana.
Eo am-pihetseham-po, alaviro ny varotra amin'ny fihetseham-po, avoahy ny varotra ny kaontinao, mialà eo amin'ny toeranao, mialà amin'ny fitantanam-bola ratsy, aza misalasala amin'izay tsy azonao atao amin'ny varotra Forex. Ny fifanakalozana Forex dia miteraka risika maro ary ny mpandraharaha dia manoro hatrany ny varotra sy ny mianatra amin'ny fotoana mitovy. Eritrereto ny fahadisoana iraisana nataon'ireo mpivarotra Forex ary mametraka ny fitsipika manokana mandritra ny varotra FX tsena. Ara-barotra amin'ny fananarana sy ny hiomana hianatra foana foto-kevitra vaovao avy amin'ny olon-kafa.
6. Foana ny mampiasa vola amin'ny Trading Education.
Isika dia tsy afaka mijanona fotsiny nanindry mafy ny maha zava-dehibe ny fampiasam-bola ny fanabeazana. Izany no zava-dehibe indrindra izany mba manomboka ao an-barotra ho amin'izao tontolo izao ny forex. Raha toa ianao ka vaovao ny Forex varotra, dia tsy maintsy mianatra betsaka araka izay afaka, hahazo-tanana eo amin'ny traikefa sy namaky betsaka FX boky sy lahatsoratra an-tserasera araka izay azonao atao mba hampianarana momba ny tenanao FX tsena. Mila te hahafanta-javatra, ny fotoana sy ny faniriana ny hahazo be dia be ny fahalalana. Rehefa vonona ianao, ny fotoana dia ny hijery ho loza antony ao Forex varotra sy ny varotra miaraka amin'ny vola, mianatra avy amin'izao tontolo izao ny mafy mandondòna sy ny traikefa.
Fahombiazana eo amin'ny tsena Forex avy amin'ny faharetana sy ny traikefa. Misy mpivarotra mihevitra fa rehefa kely dia kely ny fianarana izy ireo vonona ny hanomboka ny asa vaovao. Tena tsara ny mitadidy izay ny olon-kendry hoy taona maro lasa izay.
Ny fianarana kely dia mampidi-doza zavatra
Misotroa lalina na tsy manandrana ny Pierian Spring
Ny marivo drafts no hahafeno fifaliana ny atidoha,
Ary nisotro tena sobers antsika indray
Mpivarotra izay mahazo fahombiazana am-boalohany matetika no mandoa ny sarany taty aoriana, toy ny vitsivitsy po mahomby dia mety hanome azy ireo hatoky lainga. Dia atsaharo ny handalina sy hianatra, angamba varotra toerana lehibe kokoa, ary very be dia be ny renivohitra. Tena tsara ny maka ny fotoana sy hianatra satria misy mandritra ny fiainana ny fahafahana.
Aza Forex ny mahazatra mpivarotra fahadisoana
Aoka ianao ho liana sy hianatra izay rehetra izay azo atao momba forex
Foana vola amin'ny varotra fanabeazana
Paper varotra Forex tao amin'ny fihetsiketsehana kaonty
Andramo Real Trading amin'ny Forex Tsara broker
Inona ve aho mila manomboka Trading Forex